Kedu ihe bụ oke ifufe na nke àmụmà na kedu ka ha si bụrụ Netwọk Mgbasa Ozi
O doro anya na ị hụtụla égbè eluigwe na oké ifufe na ị bụ otu n'ime ụdị mmadụ abụọ chere ihu na ihu igwe ndị a: ị kpọrọ ha asị maọbụ ị hụrụ ha n'anya. Gbè eluigwe na oké ifufe Ha na-abụkarị ihe ngosi dị egwu nke eji igwefoto anyị na ese foto vidio anyị. Ọ bụrụ na ha ewere ọnọdụ n’abalị, ha ga-adị ọmarịcha mma ma nwekwaa mma.
Agbanyeghị, ị maara ihe kpatara ha ji eme ya na ụzọ kacha mma iji chebe onwe gị megide ya? Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmụtakwu banyere oke ifufe na àmụmà, nke a bụ post gị 🙂
1 Nkọwa oke ifufe
2 Olee otu imepu mmiri ozuzo?
2.1 Agba nke mbụ
2.2 Agba nke abụọ
2.3 Nke atọ
3 Oké ifufe na àmụmà
4 Kedu otu esi agba ọkụ
Nkọwa oke ifufe
Oké ifufe ahụ abụghị ihe ọ bụla karịa ọgba aghara dị egwu na oyi akwa nke ikuku nke nwere site na inwe nnukwu mmiri ozuzo, oke ikuku, ifufe na égbè eluigwe na akụ mmiri ígwé mgbe ụfọdụ. N'ozuzu, ha bụ ihe omume ihu igwe nke na-adịru nwa oge (ihe dị ka nkeji 20 ma ọ bụ 1 elekere kachasị) na-emetụta naanị otu mpaghara.
Oké ifufe ndị a na-emekarị na ebe okpomọkụ dị ala ma ọ bụ dị nwayọọ. Ihe ndekọ ụwa maka mpaghara kachasị oke ifufe kwa afọ na-ewere agwaetiti Java, yana ihe karịrị ụbọchị 225 nke oké ifufe na àmụmà kwa afọ.
Olee otu imepu mmiri ozuzo?
Ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị ịhụ oke mmiri ozuzo ma ọ bụ, n'ụzọ megidere, ihe dị oke egwu ma ọ bụrụ na ị nọ n'akụkụ ndị ọzọ na-adịghị mma. Oké ifufe na-amalite mgbe ikuku na-ewere ọnọdụ ike ikuku dị elu.
Ka ikuku na-ekpo ọkụ na-ebili, ọ na-abanye n'ikuku nke ikuku dị jụụ na elu ma na-abanye n'igwe ojii na-emepe emepe. Igwe ojii a malitere dị ka nnukwu humilis ha wee si n'ile anya ahu na-acha uhie uhie dapu. Ka nsogbu ikuku a nke ikuku elu na-eto, igwe ojii na-emepe emepe na-agbanwe ngụgụ cumulus.
Mgbe igwe ojii bịara buru oke ibu, a na-akpọ ya cumulonimbus wepụ mmiri niile echekwara.
A na-ekewa oké ifufe ụzọ atọ:
Agba nke mbụ
Mmiri na-eweli elu na-eme ka ígwé ojii na-amalite. ruo mita 7.500 nke elu. Gwé ojii ahụ na-agbakọta tụlee mmiri ma na-enwe ọdịdị.
Agba nke abụọ
Mgbe ígwé ojii ahụ na-etolite ọbụna karị, ha na-eru ihe ruru mita 12.000, na-ebi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mpaghara nile nke troposphere. N'ihi ọdịiche nke ọnọdụ okpomọkụ nke na-eme n'etiti oyi akwa nke ikuku na-ebili na oyi akwa na elu ebe igwe ojii na-etolite, n'ime ime enwere ike ịde ha ruo ogo nke -40 na -50 degrees.
Mmelite nwere ike iru ọsọ nke ihe ruru 100 kilomita kwa elekere. Mgbe ha jikọtara ya na igwe ojii ahụ, ụmụ irighiri ikuku dị n'ime ha na-asọba ma na-echekwa na mmiri mmiri mmiri, kristal ice na ọbụna snowflakes, dabere na ọnọdụ ihu igwe.
Mgbe ha dara n'okpuru ibu nke aka ha, ha na-eme ka ikuku dị ọkụ dị na oyi akwa dị ala ma, ya mere, mee ka ọ dịkwuo arọ. Ọ bụ mgbe ahụ ka ikuku gbadara agbadata na ọsọ nke ihe dịka kilomita 50 kwa elekere nke na-eburu mmiri ozuzo na / ma ọ bụ snow niile n’elu ụwa. Nke a bụ ihe kpatara ọtụtụ mmiri ozuzo nke na-erute n'oké ifufe buru ibu.
Mgbe igwe ojii juputara na ụmụ irighiri mmiri na enwere ikuku ikuku dị ala, n'ụzọ zuru ezu downloads na nkeji.
Ka igwe ojii na-efunahụ mmiri na olu, ikuku na-asọda na-akwụsị ma igwe ojii, na nke kachasị elu, ikuku na-achụsasị ya. Nke a bụ ihe kpatara oke ifufe na-anaghị adịte aka, mana ọ na-adị oke njọ.
Oké ifufe na àmụmà
Otu n’ime ihe ịtụnanya nke na-ewere ọnọdụ n’oké mmiri ozuzo bụ àmụmà. The ụzarị bụ ihe ọ bụla ma obere ọkụ eletrik nke na-ewere ọnọdụ n’ime igwe-oji, n’etiti igwe ojii na igwe ojii ma-ọbụ site n’igwe ojii ruo n’otu ebe n’elu ala. Maka ogwe ka ọ ghara ịkụda ala, ọ ga-ebuli ya elu ma ọ ga-enwerịrị ihe ga-adị iche na ndị ọzọ.
Ike nke àmụmà ji otu puku ugboro karịa nke anyị nwere n'ụlọ ugbu a. Ọ bụrụ na anyị nwere ike ịbụ nke a na-akwụ ụgwọ eletrik site na nkwụnye ihe nkwụnye, chee echiche ihe ọkụ nwere ike ịme. Ma yensusuw akwan abiɛsa a yebetumi afa so ada ɔdɔ a ɛte saa adi no ho. ha anwụghị. Nke a bụ n'ihi na ogologo oge nke osisi ahụ dị mkpụmkpụ, ya mere, ike ya anaghị egbu egbu.
Ha bụ ụzarị nwere ike nke ịgbasa na ihe dị ka 15.000 kilomita kwa awa ma tụọ ogologo ihe dị ka otu kilomita. Edere ihe ọkụ ọkụ dị kilomita ise n'ogologo oke oke ifufe.
N'aka nke ozo, anyi nwere egbe. Gbè eluigwe bụ mgbawa nke na-eme ka ọkụ eletrik na-enwe ike ịgbagha ogologo oge n'ihi nkuzi ndị na-eme n'etiti igwe ojii, ala na ugwu. Igwe ojii na-ebuwanye ibu ma na-agbasikwu ike, nnukwu ụda ahụ na-eme n’etiti ha.
Kedu otu esi agba ọkụ
Enwere ike ichota àmụmà n'ụzọ zuru oke site na ihe na-eme n'ụlọ anyị mgbe anyị jikọtara okporo osisi ndị dị mma nke ụzọ ọkụ. Mgbe anyị mere nke a, anyị na - emechi ụzọ ndị anyị na - eduga.
Obere obere ọkụ anyị na-ahụ mgbe ọ na-akpata obere oge na-adịkarị àmụmà ma ọ dị obere. Ihe omume a na - ewere ọnọdụ n’etiti igwe ojii nwere ụgwọ ọrụ eletriki ọzọ. N'ime igwe ojii enwere ogwe osisi ndị na-abụghị akụkụ ya na ngwụcha nke lekwasịrị anya n'ezi ebubo na nke ọjọọ na n'etiti igwe ojii na ala.
Mgbe nke a mere, àmụmà na-eme n’ime igwe ojii, n’etiti igwe ojii na igwe ojii na n’etiti igwe ojii na ụwa. Ọpụpụ ọ bụla na-ewe ọkara ọkara nke abụọ na, ọ bụ ezie na ọ na-enye nro nke naanị ịbụ àmụmà, enwere ọtụtụ puku nbudata.
Site na ozi a ị ga - enwe ike ịmatakwu ihe banyere nhazi oke ifufe na ihe kpatara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Kedu ihe bụ na otu esi amalite ifufe na àmụmà?